Sare u Kac Ku Yimid Qiimaha La Kala Siisto Qudaarta, Suuqyada Dhuusamareeb – Goobjoog News
Sare u kac ballaaran ayaa xiligaan waxaa laga dareemayaa qiimaha la kala siisto qudaarta cagaaran ee suuqyada degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgalduud.
Abaaraha ka jira gobolka Galgaduud iyo gobollo kale oo kamid ah dalka ayaa saameeyey qiimihii qudaarta ee degmada Dhuusamareeb, iyadoo taasi ay saameyn ku yeelatay dadka shacabka ah.
Qaar kamid ah dadka ka ganacsada Qudaarta ee Suuqayada degmada Dhuusamareeb ayaa u sheegay Goobjoog News in Saddexdii maalinba mar la keeno qudaar, sababtuna waxay tahay beerihii ku dhowaa degmada Dhuusamareeb oo saameeyay abaarta iyo sidoo kale kuwa laga keeno gobolka Hiiraan oo aad u yar.
“Sidii hore qudaarta ma ahan, markii hore dadka reer baadiyaha ayaan ku tiirsaneyn laakiinse hadda waxaasi oo dhan ma jiraan, qudaarti yareed ee gobolka malahan, sidoo kalena ma jirto qudaartii kale ee ka imaaneysay gobolka Hiiraaan” sidaasi waxaa u sheegay Goobjoog News, ganacsade ka ganacsada qudaarta.
Abaaraha ka jira gobollada dalka ayaa saameeyey waxyaabo badan oo dadka iyo duunyada ay ku noolaayeen, iyadoo ay jiraan deegaanno aanba laga helay qudaar dadka ku filan.
Puntland “Hadii Jiritaanka Puntland Iyo Shacabkeeda Qatar Loo Muujiyo Anagu Gacmaha Kama Laabanayno” (Dhageyso)
Waraysi:- Xuseen Macallin Oo Faah Faahin Ka Baxiyay Warbixintii Ka Soo Baxday Machadka Hiraal